वर्षाको अनुकुलताले गत वर्षभन्दा १० प्रतिशतले बढी रोपाइँँ «
रोपाइँँ ६४ प्रतिशत नाघ्यो
असार अन्तिमसम्म मुलुकभर धान खेती हुने ६४ प्रतिशतमा खेतमा रोपाइँ सकिएको छ । गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो १० प्रतिशत बढी हो । गत वर्ष असार ३२ गतेसम्म ५३.८३ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ सकिएको थियो ।
असार तेस्रो र चौथो साता मौसम अनुकुलता हुँदा रोपाइँको गति बढेको कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । तथ्यांक अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी मध्य पहाडमा ६६.९९ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । जसमध्ये उच्च पहाडमा ६३.९५ प्रतिशत र तराइमा ६३.२ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । क्षेत्रफलको हिसाबले भने तराइमा सबैभन्दा बढी ६ लाख ८९ हजार ८७१ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ भने मध्यपहाडमा २ लाख २६ हजार ७२९ हेक्टर र उच्च पहाडी क्षेत्रमा ३७ हजार १८९ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ ।
आकाशे पानीमा निर्भर भएकाले नेपालको धान रोपाइँको गति पनि वर्षाको अनुपातमै अगाडि बढ्ने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । “धानको लागि निरन्तर वर्षा हुनु राम्रो मानिन्छ, यो एकैपटक धेरैभन्दा पनि पटकपटक पानी परेको छ, जुन धान रोपाइँको लागि अनुकुल हो,” धानविज्ञ डा. भोलामान सिंह बस्नेत भन्छन्, “साउन १५ सम्मको रोपाइँले प्रतिफल दिने भएकाले यही गतिमा रोपाइँ हुँदा गत वर्षभन्दा बढी क्षेत्रमा रोपाइँ हुने देखिन्छ ।” गत वर्ष भन्दा यो वर्षको रोपाइँको गति छिटो गतिमा भएकाले उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । गत वर्ष अधिक वर्षा, खण्ड वृद्धि तथा बाढी पहिरोका कारण धान रोपाइँको क्षेत्र घटेको थियो ।
मन्त्रालयले धान रोपाइँँको तथ्यांक साविकको विकास क्षेत्रको संरचनाअनुसार संकलन गर्ने काम गर्ने गरेको छ । जसअनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी सुदुरपश्चिममा ८९.३६ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ भने सबैभन्दा कम पूर्वाञ्चलमा ४८.७३ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । पश्चिमाञ्चलमा ७३ प्रतिशत, मध्यपश्चिमाञ्चलमा ६९ प्रतिशत र मध्यमाञ्चलमा ६१ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ सकिएको छ । गत वर्ष १३ लाख ६३ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ भएकोमा ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको तथ्यांक छ । नेपालमा सिँचित क्षेत्र कम भएकाले पनि धान उत्पादनको अवस्था आकासे पानीमै निर्भर हुने गरको छ । तथ्यांकमा ४५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा सिँचाइ भए पनि फिल्डमा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सिंचाइ रहेको मन्त्रालयका सविच डा. युवकध्वज जिसीले यसअघि नै बताउदै आएका छन् ।
नेपालभर १५ लाख ५२ हजार ४६८ हेक्टर जमिन वर्षे धान खेतीयोग्य जमिन मानिन्छ । खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिव ११ लाख हेक्टर जमिन तराइमा पर्छ भने मध्यपहाडमा करिव ४० हजार र उच्च महाडमा ५८ हजार हेक्टर क्षेत्र पर्दछ । हालसम्मको रोपाइँको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष मध्यपहाड र उच्च पहाडमा रोपाइँको प्रतिशत घट्ने देखिएको छ । दुबै भेगमा असारभर सबै रोपाइँ गरिसक्ने विगतको अभ्यास छ । यद्यपी पहाडी क्षेत्रका २२ जिल्लामा हुनेजति धान खेतीबाट आउने उत्पादन तराइको झापा जिल्लाबाट मात्र आउने गरेको छ । कुल धान उत्पादनको ७० प्रतिशत हिस्सा तराइ र भित्री मधेसले मात्र ओगटेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार असार मध्यसम्म मुलुकभर २० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो । असार १५ सम्म १० प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएकोमा एकै दिनमा रोपाइँदर शतप्रतिशतले बढेर असार १६ गतेसम्म २० प्रतिशतले रोपाइँ भएको थियो । तराई क्षेत्रमा ढिलो वर्षा हुँदा पनि धान उत्पादनमा अनुकुल प्रभाव पर्ने देखिए पनि पहाडमा भने समयमा वर्षा नहुँदा रोपाइँ प्रभावित हुने गर्छ । पहाडमा जेठ र असारभर रोपाइँ सकिसक्छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मणिरत्न अर्यालले रोपाइँको यही गति रहेमा यो वर्ष रोपाइँको प्रतिशत ९५ प्रतिशतसम्म पुग्ने बताए ।